အထူးကဏ္ဍ, တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ
ဦးကိုကိုကြီး၊ ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်
“ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ အမျိုးသားအစိုးရတစ်ရပ် ပေါ်လာစေဖို့ပင်” ဟန်းစ် ဟာ့စ် ရေးသားသည်။ နိုင်ငံတကာ အစိုးရများအဖို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီရေး ကြိုးပမ်းမှုများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွဲ၍သာ မြင်ကြသည်။ လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမီးဖြစ်ပြီး သူသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် မိခင်နေမကောင်းသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာစဉ်.
နာမည်ကျော်ကြားလာသော ကြယ်ပွင့်တစ်ဦးဖြစ်သည့် အမွန်းသည် သူ၏ ပုရိသပရိသတ်များကို ဆွဲဆောင် နိုင်သောဟန်ပန်ဖြင့် ရှေးရိုးစွဲမြန်မာများကို တုန်လှုပ်စေခဲ့သည်။ သူ၏ နောက်ဆုံးထွက် တေးအယ်ဘမ်သစ် သည် သူ့ကို နိုင်ငံတကာတွင် ကျော်ကြားလာစေနိုင်လိမ့်မည်ဟု သူကိုယ်တိုင်က မျှော်လင့်လျက်ရှိသည်။ ဟန်းစ် ဟာ့စ် ရေးသားသည်။ ဓာတ်ပုံ – အန်းဝမ် အမွန်းကို.
News Feed, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ
လားရှိုး မဲအငြင်းပွားမှု မသမာမှုမဟုတ်ဟု ဦးတင်အေးဆို
စိုးသန်းလင်း ရေးသားသည်။ နေပြည်တော်။ ။ ဒုသမ္မတဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော ရှမ်းပြည်နယ်လားရှိုးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင်ဖြစ်ပွားနေသည့် မဲအငြင်းပွားမှုမှာ မသာမာမှုမဟုတ်ဘဲ အထင်လွဲနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးက နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက် ညနေပိုင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တွင် သတင်းထောက်များကိုပြောကြားလိုက်သည်။ နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကော်ရုံးချုပ်တွင်ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သတင်းထောက်များ ၏ မေးခွန်းများအပေါ် ဒေါသထွက်နေပုံရသည့်.
ပြည်သူများ သတိရှိရှိဖြင့် တည်ငြိမ်စွာဖြတ်သန်းရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
လက်ရှိအခြေအနေကို သတိရှိရှိဖြင့် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဖြတ်သန်းကြရန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက် နံနက်က ပါတီရုံးချုပ်မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်သည်။ ကျော်ဖုန်းကျော် ရေးသားသည်။ aw20151108-3.jpg ယမန်နေ့က ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ဒီချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရွှေဂုံတိုင်ရှိ ဆောက်လက်စ အဖွဲ့ချုပ်အဆောက်အဦပေါ်မှ.
News Feed, News, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ
စိုးရိမ်မှုတွေကြားမှ မြန်မာတွေ မဲပေးနေဆဲ
News Feed, Breaking News, အထူးကဏ္ဍ, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ
ကိုယ့်ပါတီကိုသာ မဲပေးမည်ဟု သမ္မတ ပြော
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ထုတ်ပယ်ခံရသတင်းကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ငြင်းဆို
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၄ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းအား ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ထုတ်ပယ်လိုက်သည်ဆိုသော စောစောပိုင်းက ထွက်လာသောသတင်းမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း အာဏာရ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ငြင်းဆိုလိုက်သည်။ သြဂုတ်လအတွင်းက ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှ ဖယ်ရှားခံရသော သူရဦးရွှေမန်းအား ပါတီမှ ထုတ်ပယ်လိုက်သည်ဟူသော သတင်းမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက နေပြည်တော်၌.